Ndị isi ọchịchị kwadoro ijeri naira #48.4 maka ịrụ okporo ụzọ. – Igbo Services
TIMOTHY CHOJI, N’ABUJA KỌWAPỤTARA YA NA BEKEE.
Ụlọ ọrụ Naijiria na Wednesday kwadoro #48.4 ijeri maka okporo ụzọ na Taraba na Yobe States, North-East Naijiria.
Mịnịsta na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Lai Mohammed kpughere nke a nye ndị nta akụkọ n’ụlọomeiwu steeti maka mkpebi ha mere na ọgbakọ ndị minista n’izu a nke Onyeisiala Muhammadu Buhari duziri.
N’inye nhụsianya a, Mohammed kwuru na a kwadoro ijeri naira 29.8 dị ka ego edegharịrị maka ịrụzigharị okporo ụzọ Yola-Hong-Mubi na N18. Ijeri akwadoro gọọmentị Yobe steeti dịka nkwụghachi maka iwu okporo ụzọ gọọmentị etiti na steeti ahụ.
O kwuru, sị: “Mịnịsta na-ahụ maka ọrụ na ụlọ, Babatunde Fashola gosipụtara akwụkwọ ndetu abụọ, nke ha abụọ kwadoro. Nke mbụ bụ maka nlegharị anya ngụkọta ọnụ ego nke onyinye nkwekọrịta maka ndozigharị okporo ụzọ Yola-Hong-Mubi dị na Adamawa steeti maka nchikota N29,826, 708,000, yana oge ọzọ nke ọnwa 24 ga-agwụ. . A ga-akwado ya site na nkekọ Sukuk. ”
O kwuru na ndetu nke abụọ akwadoro maka Mịnịstrị na-ahụ maka ọrụ bụ nke nkwụghachi gọọmentị Yobe steeti, maka ọrụ ụzọ ụfọdụ ọ rụrụ n’aha gọọmentị etiti.
“Nke abụọ bụ ndetu ya nke na-achọ nkwado kansụl maka nkwụghachi ụgwọ nke asambodo ma kwado ya site n’aka kọmitii inter-ministerial pụrụ iche nke gọọmentị etiti hibere iji nyochaa nkwupụta ndị gọọmentị Yobe steeti kwuru.
ijeri naira #48.4isi ọchịchịkwadoro
Ndị ọrụ nchekwa obodo na-akwado mgbasa ozi iji kwalite udo, ịdị n’otu.